10 Anime Aan Hubaal Ahayn Oo Laysanka Sketchy Ka Wado Galbeedka - Kale
10 Anime Aan Hubaal Aheyn Oo La Yeelatay Qaar Ka Mid Ah Ruqsadaha Ugu Qaalisan Suuqa Galbeedka
Dhibcaha muuqaalka muuqaalka leh: zerochan.net
Cinwaano badan ayaa shati haysta ka dibna la ilaaway halka kuwa kale xitaa aan laysan lasiin iyadoo ay jirto baahi iyo caannimo. Maqaalkani wuxuu eegayaa 10 ka mid ah rukhsadaha oo aan hadda hubin suuqa reer galbeedka.
1 - Revolutio la taaban karo
Isha Sawirka: Websaydh Rasmi ah
Ruqsad u siisay FUNimation in yar ka dib, wali kama aanan maqal cinwaankan tan iyo markii ay hawada ka baxday. In kasta oo Funimation ay waqtigeeda qaadatay kahor lana dhihi karo waxay u egtahay in aysan ogolaan doonin shati ay bixiyeen lacag fiican si ay si fudud ugu raagaan, waxay umuuqataa wax lala yaabo in wax horumar ah aan laga gaarin cinwaankan, gabi ahaanba.
Waxaa laga yaabaa in dhanka Japan waxyaabaha ay kor u hayaan sii deynta laakiin hal shay waa hubaal, waqtiga la siidaayo ee Regularutio la taaban karo ayaa u muuqda inuu sii dhamaanaayo.
Si weyn ayaa looga indha-tiray Galbeedka, Gintama aakhirkii waxaa la siidaayay markii ugu horreysay dhulka reer Galbeedka markii shirkadda Sentai Filmworks ay sii deysay 49-kii qaybood ee ugu horreeyay DVD-ga la turjumay 2010 iyo 2011.
Ugu dambeyntii, filimka filimka ah ayaa sidoo kale arki doona sii deyn, markan loogu magac daray Ingiriis, oo uu qoray Sentai; laakiin tan iyo markaas ma aysan sii deynin hal guri oo Gintama ah. Waa ammaan in loo qaato in xuquuqaha, ajandaha Sentai, ay dhinteen. Laakiin markaa rajo ayaa dhawaan dib loogu soo nooleeyay taageerayaasha markii Crunchyroll uu bilaabay inuu sii daayo dhacdooyin loogu magac daray taxanaha ka dibna FUNimation wuxuu sameeyay DVD / BD sii deynta qayb cusub oo dhacdooyin ah sidoo kale.
Haddaba waa maxay dhibaatadu? Dhibaatadu waa Funimation oo kaliya laga sii daayay qaybo ka mid ah qaybaha dambe ee taxanaha, maahan bilowga.
Marka hada waxaan heysanaa in kabadan boqol dhacdo oo Crunchyroll qirtey ineysan laheyn xuquuqdeeda, waxaan qiyaasi karnaa oo kaliya Sentai oo heysta liisanka aysan hada isticmaalin, fikrad malahan hadii waligood la magacaabi doono, iskaba daa in lasii daayo warbaahinta jirka.
Ma aha in la sheego waxay si fiican u noqon kartaa xitaa inaysan dhaqaale ahaan u qalmin sii deynta qaybahaas inkasta oo tani ay tahay wax kaliya Crunchy iyo Funi ay ogaan lahaayeen waqtigan.
3 - Heesta Nookha
Isha Sawirka: Waxaa laga soo qaatay taxanaha TV-ga 'Lyrical Nanoha'
Labadaba xilli ciyaareedkii kowaad iyo kii labaad ee rukhsad bixinta waxaa ruqsad siiyay Geneon Entertainment waxaana lagu siidaayay dub bartamihii ilaa dabayaaqadii 2000s.
Tan iyo markii uu burburay suuqa anime inkastoo, wax horumar ah oo dheeri ah ma raacin xayeysiinta Nanoha ee galbeedka. StrikerS, labada xilli ee Vivid iyo aflaamta ayaa sii ahaanaya iyada oo aan la sii deynin jir ahaaneed, iskaba daa duub, wax kastoo naloo ogolaaday inaan gacmaheena ku qabanana waa durdurro sharci ah oo cinwaannadan qaarkood ah.
Iyada oo xayeysiintu wali sii socoto wax kasta ayaa dhici kara, laakiin sababta aysan wali wax wali u jirin iyo waxa ku dhici doona mid ka mid ah taxanaha aan la sii deyn iyo filimada ayaa ah qof walba qiyaasta xilligan.
Xitaa waxaa jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in Aniplex laga yaabo inuu ku lug yeesho inkasta oo aan caddayn la taaban karo laga helin dhinacaas. Hal ray oo rajo ah ayaa ah sii deynta masraxa reer galbeedka ee filimka Nanoha oo umuuqda inay muujineyso dhanka Japan ee warshadaha ugu yaraan inay weli xiiseynayaan suuqa reer galbeedka.
4 - Masiirka / Khadka kale ee Prisma ☆ Illya 3rei !! (Ama xilli 4) + Filimka
Sentai Filmworks ayaa shatiyeysay, oo loogu magac daray lana sii daayay seddexdii xilli ciyaareed ee ugu horeysay taxanahan reer galbeedka. Qeybtii afaraad iyo filimka wali lama sii deyn inkasta oo aan wax hadal ah laga siinin shatigooda.
Lama hubo waxa ku dhacaya sharcigan. Waa qayb ka mid ah Masiirka / xayeysiinta weyn oo sidaa darteed waxay u muuqataa inaysan u badnayn inay noqoto mid aan faa'iido doon ahayn ama laga tegi karin.
Crunchyroll iyo Sentai waxay ku dagaallamayeen cinwaanno aan waqti fog fog ahayn oo laga yaabee inay tahay FUNimation, iyada oo loo marayo Crunchyroll, oo hadda leh xuquuqda gelitaanka cusub ee xayeysiintan laakiin haddii ay taasi jirto, maxay uga hadli la'yihiin arrintaas.
Dabcan, Funimation waxay muujisay xushmad la'aan daran markay tahay cinwaannada ay sii daayaan iyada oo loo marayo shirkadaha kale maadaama aan aragnay digniin yar oo loogu talagalay Kabaneri ee Qalcadda Birta iyo Re: Zero. In kasta oo mid markii dambe la xaqiijiyay in la sii daayay muuqaal ahaan iyo Re: Zero horay ayaa loo muujiyay inuu leeyahay dub shaqooyinka.
Waqtigaan la joogo, ma jiro wax war ah oo ku saabsan waxa dhici doona iyadoo la qaban doono wax shaqo ah oo mustaqbalka ah oo ka mid ah qeybtan xuquuqaha iyo waqtiga ugu dambeeya ee qof ku dhawaaqaya inuu ruqsad siiyaya uu si xawli ah ku socdo.
5 - Phi-Maskaxda 3aad
Isha Sawirka: Bogga Crunchyroll ee taxanaha
Labadii xilli ciyaareed ee koowaad iyo labaad labadaba waxaa lagu sii daayay BD iyo DVD oo ay duubtay Sentai Filmworks laakiin taasi waxay ku soo noqotay 2013. Tan iyo markaas, xilli saddexaad iyo kii ugu dambeeyay, in kasta oo shati loo haysto, weligood lama siidaynin ama xitaa Sentai ugama hadlin jir ahaan warbaahinta.
Waxaa laga yaabaa inaan qiyaasi karno xilli-labo iyo laba sifiican uma iibineynin sidaa darteedna waxay go'aansadeen inay ku fariistaan ​​liisanka laakiin waxaad u maleyn laheyd inay sii deyn lahaayeen si kasta oo ay dib ugu soo ceshadaan kharashka.
Dabcan, Sentai wuxuu yiri waxkasta oo ay bilaabayaan dubing waxay arki doonaan wixii xigto ah ee mustaqbalka ama wareejinta sidoo kale waxay helayaan dub waxaana sidaas oo kale laga yaabaa inay go'aansadeen in hadii xilli ciyaareedkii seddexaad uusan mudneyn dubbitaan, ma aheyn wax qiimo leh in lasii daayo gabi ahaanba. In kasta oo dub ama aan ahayn, haddana waxay u muuqataa inay xiiso leedahay markii Sentai uu cinwaannadooda ka raray Shabakadda Anime una wareejiyo HIDIVE, xilli koowaad iyo labo ka mid ah taxanaha labadaba waa la wareejiyay laakiin xilli seddexaad ma uusan sameyn.
Waxay umuuqataa inay tahay wax aan macquul aheyn waqtigan inaan arki doono muuqaal jireed oo cinwaankan ah mustaqbalka dhow laakiin waxa xitaa ka sii jahwareersan ayaa ah diidmada Sentai ee ah in la cusbooneysiiyo taageerayaasha xaalada.
6 - Rock Lee & Ninkiisa Pals
Isha Sawirka: TV Tokyo
Ku soo noqoshada 2012, VIZ waxay shati siisay, oo loogu magac daray ka dibna durdurisay Rock Lee iyo Ninja Pals laakiin waxay kaga duwan tahay guryaha kale ee lahaanshaha 'Naruto franchise', waligeed ma arag sii deyn muuqaal ah.
Xitaa Australia (Iyada oo loo marayo Madman Entertainment) ayaa cinwaanka ku sii deysay fiidiyaha guriga; in kastoo DVD kaliya.
Waxay u muuqataa wax la yaab leh in VIZ aysan waligood wax ku qaban tan, laga yaabee in tirooyinka qulqulka ay xun yihiin, laakiin xilligan waxay u muuqataa inay u badan tahay in siideyn aan kor loo soo qaadin, ama aan laga helin VIZ ugu yaraan.
7 - Boruto: Naruto Jiilka xiga
Gelitaanka cusub ee caanka ah ee loo yaqaan 'Naruto franchise', Boruto, wuxuu umuuqdaa mid hubaal ah inuu arko sii deyn jireed mar uun. Hase yeeshee, la'aanta wax macluumaad ah oo ku saabsan taxanaha ayaa xoogaa jahwareer leh.
VIZ waxay haysataa liisanka Boruto iyo xuquuqda sii deynta jirka sidoo kale. In kasta oo hadda laga sii daayay Crunchyroll, ma jiro wax war ah oo dub ah ama muuqaal fiidiyow oo gurigu leeyahay; xitaa xaqiijinta mashaariicdan oo kale inay kujiraan shaqooyin.
In kasta oo aan ku aragnay maareynta Funimation ee Dragon Ball Super iyo VIZ ee Hunter x Hunter in taxanaha muuqaalka sare aamusnaan karo illaa ay diyaar u yihiin inay sii daayaan, weli waxay noqon kartaa sugitaan dheer oo aan la hubin ee taageerayaasha.
Haddii aan sharad geli lahaa, ogeysiis ayaa laga yaabaa in loo sameeyo siideynta jireed markii ay dhaafaan qeybta 100 ama marka Shippuden DVD-yada ay dhammeeyaan sii deyntooda.
8 - Weeraryahannada Shaqo-laawe: Hawlgalkii Falaarta Guusha
Labada xilli ee Strike Witches iyo filimkuba waa la shatiyeeyay, oo loogu magac daray laguna sii daayay Funimation iyo taxanaha cusub ee Brave Witches ayaa durba helay dub waxaana loo balan qaadayaa inuu arko sii deynta mustaqbalka dhow. Laakiin maxaa laga yeelayaa Fallaarta Guusha OVA ee 2014?
Funimation ma liisan ama xitaa ma sheegin OVA iyo taariikhdooda aan sinnayn ee OVAs ee xitaa xayeysiisyo la aasaasay iyo sidoo kale waqtigii ka soo gudbay tan iyo markii la sii daayay, waxay ka dhigeysaa shaki inaan waligeen arki doonno sii deynta jireed ee qeyb ka mid ah rukhsadda .
9 - Dhiig +
Isha Sawirka: Waxsoosaarka Waxsoosaarka IG
Musalsalku wuxuu soo ifbaxay 2005 wuxuuna helay jidkiisa, oo loogu magac daray, TV-yada Mareykanka 2007. Kadibna waxaa lagu sii daayay DVD-ga oo sii deyntiisa mug leh oo aan dhameystirneyn ilaa maantadan ka dibna waxaa lagu sii daayay labo, 25 dhacdo sanduuqyo ah sanadkii 2009.
Labadan qayboodba hadda waa la daabacay. Weli ma ogin waxa ku dhici doona taxanahan: Haddii ay waligeed soo noqonayso, haddii ay heli doonto BD sii deyn iyo wixii la mid ah… Laakiin Sony, oo haysata liisanka, iibsatay Funimation, laga yaabee inay taasi cusubi fureyso fursadaha mustaqbalka dhow; ama sidaa darteed taageerayaasha ayaa rajeynaya.
10. - Mushishi: Cutubka Xiga (Ama Xilliga 2aad)
Mushishi wuxuu ruqsad ka helay Funimation, oo loogu magac daray lana sii daayay 2007 - 2008 tiro, ka dibna sanduuq la dhigay 2008 ugu dambayntiina, lagu dhuftay SAVE Edition sanadkii 2011.
Si kastaba ha noqotee, xilli-ciyaareedkii ugu horreeyay dib looma sii deynin shucaaca waxayna umuuqataa inaysan arki doonin daaweyn noocaan ah mustaqbalka dhow. Taxanaha Mushishi wuxuu aakhirkii arkay silsilad 1 saac ah oo gaar ah (Hihamukage), silsilad taxane ah (cutubka Xiga) iyo filim (La qabsiga qaansada dambe ee manga); kuwaas oo dhammaantood ay shati siisay Aniplex laakiin aan weligood la sii dayn.
Sida shatiyada kale ee hore ee Aniplex, waxbana kamaanaan maqal.
Mar uun, Madman Australia waxay liis garaynaysay sii deynta xilli-ciyaareedkii labaad waxayna muujisay inay ku jirto duub, laakiin liiskan waxaa laga saaray maalmo gudahood.
Waqti badan oo la soo dhaafay, Mushishi oo ah mid aan la jeclayn (Ama ugu yaraan aan faa'iido ugu filneyn shirkadaha waaweyn si ay u daryeelaan) xayeysiinta galbeedka iyo calaamado badan oo is khilaafsan oo ku saabsan gobolka liisanka, waa qof walba qiyaastiisa haddii inta kale ee Mushishi waligood waligood la sii daayo.
Tani waa tan, hadda ugu yaraan. Waxaa jira cinwaano badan oo aan la tirin karin isla xaaladaas oo kale waxaana laga yaabaa inaan maqaal kale ka sameeyo mowduuca mar uun. Laakiin hadda, waxaan rabaa inaan u gudbo maaddooyin kala duwan.
Sida caadiga ah, haddii aad hayso macluumaad ama ra'yi ku saabsan cinwaannada soo socda iyo xaaladdooda, ha ka waaban inaad faallo ka bixiso.
Maqaalkan waxaa qoray Gabriel Persechino-Forest ka Sakura Anime News Blog.
Ilaha asalka ah:
5 Ruqsadaha Aan La Hubin (Qeybta 1)
5 Ruqsadaha Aan La Hubin (Qaybta 2)
nolosha bebop cowboy waa riyo